PM Ntsay Christian · Fitiliana faobe eto Antananarivo · Tsy mbola fantatra ny datim-panadinana
Hapetraka ny toerana iray eto Antananarivo, ka izay olona miahiahy amin’ny fahasalamany dia afaka manantona ao, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian. Hisokatra 7/7 andro manomboka ny alarobia 1 jolay eny amin’ny Village Voara. Ho maimaimpoana ny fitiliana.
Afaka mody, ary afaka misafidy ny hijanona ny marary, araka izay tiany, fa manaja ny fepetra tsy hipariahan’ny valanaretina. Manomboka eo ny fanomezana fanefitra na fanafody. Afaka misafidy ny hihiboka any an-trano amin’ny toeram-ponenana, fa manaja ny fepetra tsy hamindra. Hisy ny fitanana an-tsoratra na rejisitra hahafahana miantso sy mijery in-telo isan’andro ny fivoaran’ny fahasalaman’ilay olona marary mijanona any an-trano. Hametraka laboratoara hanao fitiliana ny olona efa nihiboka 12 na 14 andro, ka mila ny fahazoan-dàlana mivoaka na “protocole de sortie” hanao fitiliana ny fanjakana, ka 48 ora no tokony hivaly. Ny CICM no napetraka hanao an’io ary afaka manampy azy ny Laboratoara ao amin’ny HJRA.
HOHAMAFISINA NY FAMPIHARANA NY FEPETRA
Tsy miova amin’ny ankampobeny ny fepetra ho an’Analamanga fa ho hentitra kosa ny fampiharana azy. Tazonina ny fepetra hahafahana miasa afatsy ireo sokajin’olona marefo, ka hisy ny fifampiresahana momba ireo mpiasa tsy miankina marefo. Amin’ny 5 ora hariva ny fitsaharan’ny asa, amin’ny 7 ora ny taksibe izay tsy afa-mampiasa ny seza afovoany. Hisy ny fanaraha-maso hentitra ataon’ny mpitandro filaminana. Nampitoviana amin’Analamanga ny ora iasan’ny mpiasa sy ny mpitatitra any Toamasina I sy II, Moramanga sy Fenoarivo Antsinanana, ary samy mbola mihantra ny “couvre-feu” amin’ny 10 ora alina hatramin’ny 4ora maraina. Miverina ny fianarana ho an’ny mpianatra hanala fanadinam-panjakana arahina fepetra ara-pahasalamana sy ara-pahadiovana. Mbola tsy misokatra ny zotra nasionaly, ary hohamafisina ny sakana ara-pahasalamana. Voarara hatrany ny famoriam-bahoaka mihoatra ny 50 manerana ny nosy. Tsy mbola misokatra ny bar, toeram-pamoriam-bahoaka,… Tsy mbola misokatra ny sidina ana habakabaka.
TSY MBOLA VOAFARITRA NY DATIM-PANADINANA
Mbola mitohy ny ady ! Tsy maintsy hisy ny fanadinam-panjakana atao amin’ity taona ity, ary efa miomana amin’izany. Mbola tsy fotoana hitenenana hoe rahoviana ny datim-panadinana. Miandry ny fivoaran’ny valanaretina, fa amin’ny fotoana maha mety azy dia holazaina ny daty, hoy ny Praiminisitra.